एमाले प्रवेश गरेकाे महिनादिन नपुग्दै नायिका मानन्धरले पार्टी छाेड्दै, यस्ताे कारण थाहा पाएपछि ? – Annapurna Post News
April 20, 2022 sujaLeaveaComment on एमाले प्रवेश गरेकाे महिनादिन नपुग्दै नायिका मानन्धरले पार्टी छाेड्दै, यस्ताे कारण थाहा पाएपछि ?
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले गएको चैत ८ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सदस्यता लिइन्। यसपछि उनी आधिकारिक रुपमा राजनीतिमा होमिइन्। एमालेभन्दा अगाडि उनी डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा स्थापना भएको तत्कालीन नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टीमा आवद्ध थिइन्। पछि पार्टीमा आफ्नो उपस्थितिको विषय खड्किएपछि उनले राजनीतिबाट टाढा रहने र आफ्नो छुटेको पढाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिन्।
मैतिदेवीस्थित त्रिवेणी पब्लिक सेकेन्डरी स्कुलमा ७ कक्षामा भर्ना भएर कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेकी करिश्माले मानविकी संकायमा प्लस टु उत्तीर्ण गरिन्। हाल स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेकी मानन्धरले आफूलाई मूलधारको राजनीतिमा उभ्याएकी छन्।
एमाले पार्टी प्रवेशको उद्देश्य र राजनीतिमा उनको उपस्थिति कुन रुपमा अगाडि बढ्ला, साधारण सदस्य बनेर एमालेमा प्रवेश गरेकी मानन्धरको पार्टीभित्र रहनुको उद्देश्य के हो? यसबारे उनले देशसञ्चारसँग कुराकानी गरेकी छन्।
१. पार्टी प्रवेशपछिको दुई साता कस्तो भइरहेको छ?
अहिले म पार्टीका साथीहरुसँग परिचयको क्रममा छु। विभिन्न कार्यक्रममा जाने गरेको छु। ताकि धेरै भन्दा धेरै साथीहरुसँग भेटघाट होस्।
२. तपाई पहिला नयाँ शक्ति नेपालमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, अहिले एमाले प्रवेश गर्ने सन्दर्भ कसरी मिल्यो?मान्छेले जो सोच्छ, त्यही अनुसारका लक्ष्य आफूतर्फ आकर्षित हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई यदि चित्रकला सिक्न मन छ भने तपाईँले बाटोतिर हेर्दा चित्रकला सिकाउने ठाउँ देख्नुहुन्छ।
राजनीति पनि मेरो लागि त्यही हो, मैले नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टीमा आवद्ध भएपछि राजनीतिमा जुन तरिकाले लागेको थिए, त्यसरी लाग्ने हैन रहेछ, मैले धेरै कुरा बुझ्न जान्न आवश्यक रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। आफूमा धेरै सीप विकास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मनन भयो। त्यसपछि मैले केही समय ग्याप लिए।अहिले मलाई कुनै राजनीतिक पार्टीको सिद्धान्तसँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने लाग्यो र सही समय पनि यही भयो।
३. सही समय भनेको?आफू तयार हुन हो।जस्तो आफूलाई राजनीतिक विषयमा सोधिएका कुरा र तपाईले राजनीतिमा लागेर गर्न खोजेको कुरा स्पष्ट हुनुपर्‍यो। तपाईँसँग सोधिने कुराको जवाफ हुनुपर्‍यो र राजनीतिमा किन आएको भनेर पनि प्रस्ट हुनुपर्छ। यी सबै कुराले गर्दा म अहिले तयार भएजस्तो लाग्यो।
४) तपाईँले चाहनुभएको चाहिँ के हो ?-एकजना शुभ चिन्तकले मलाई बिहानमात्र सोध्नुभएको थियो, तपाईँ आफूमा यति सक्षम र बलियो स्थान भइसकेको मान्छे यो सबै छोडेर आफूलाई गौण बनाउनु भएको?
मैले म आफू यसमा धेरै खुसी भएको बताएँ। किनकि मैले ३० वर्षको कला यात्रा र व्यक्तिगत जीवन मेरो लागि धेरै कुरा गरिसकेँ। अब म अरुको लागि केही गर्न चाहन्छु। त्यसैले म गौण बन्दा केही छैन।
५) कलाकारितामा तपाईँको सक्रिय ३० वर्ष थियो। तपाईँ निर्माणको काममा पनि लाग्नु भएको थियो, त्यही क्षेत्रको विकासको लागि किन नलाग्नुभएको?यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नलागेको भए, मलाई कसैले पनि अहिलेसम्म करिश्मा मानन्धर भनेर सम्झिँदैन थिए। हामी सबै कलाकार सबै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नै लागिपरेको हो।